Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Maanta Oo Sabti Ah Qoreen Wargeysyada Yurub - Gool24.Net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Maanta Oo Sabti Ah Qoreen Wargeysyada Yurub
Maalin wanaagsan akhristayaasheena sharafta leh meel walba oo aad joogtaan, sida aan inooga barateen waxaan maanta oo Sabti ah idiin soo gudbineynaa wararkii ugu danbeeyay ee ay qoreen wargeysyada iyo warbaahinta qaarada Yurub ee ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Kooxaha xifaaltanka ugu weyni ka dhexeeyo ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa toddobaadyada soo socda si fool ka fool ah ugu hirdami doona saxeexa Neymar JR oo PSG ka tirsan. (Football Espana)
Fursadii uu Paul Pogba ugu wareegi lahaa Real Madrid xagaagan ayaa gabi ahaanba u muuqata mid baaba’day waxaana uu haatan Paul u muuqdaa mid kusii baaqi ahaan doona Manchester United. (Sport)
Weeraryahanka kooxda Athletic Bilbao ee Inaki Williams ayaa xiisaynaya inuu u dhaqaaqo Manchester United walow uu seegay inuu u wareego maalintii ugu dambaysay ee suuqa Premier League. (AS)
Khadka dhexe ee kooxda Real Madrid ee James Rodriguez ayaa doonaya inuu u wareego kooxda ay Madrid magaalo wadaaga yihiin ee Atletico Madrid. (Onda Cero)
AS Roma ayaa xiisaynaysa weeraryahanka kooxda Napoli ee Dries Mertens xilli ay ku dhaw yihiin inay Inter Milan ka iibiyaan weeraryahan Edin Dzeko. (Calciomercato)
Bar-tilmaameedka kooxaha Inter Milan iyo PSG ee Ivan Rakitic ayaa kooxdiisa Barcelona u sheegay inuu doonayo sii joogista kooxda. (Mundo Deportivo)
PSG ayaa diyaarinaysa dalab ay mushahar ahaan 12 Milyan u siinayso Paulo Dybala iyadoo kooxdiisa Juventus ay doonayso inay ka iibiso Paris halkii ay ka iibin lahayd Inter Milan oo xifaaltan weyni ka dhexeeyo. (La Gazzetta dello Sport)
Khadka dhexe ee kusoo guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or ee Luka Modric ayaa baaqi kusii ahaan doona Real Madrid walow ay jiraan warar la xidhiidhinaya Paris Saint-Germain. (Marca)
Garabka Inter Milan ee Ivan Perisic ayaa qarka u saaraan inuu qaab amaah ah ugu wareego Bayern Munich oo hadhaw si rasmi ah 30 Milyan ugula wareegi karta walow uusan isagu doonayn inuu amaah ku baxo. (Sky Sport Italia)
Inter ayaan wali ka dhammaanin suuqa kala iibsiga ee xagaagan waxaana ay wali qorshaynayaan inay u dhaqaaqaan Sergej Milinkovic Savic oo Lazio ka tirsan. (La Gazzetta dello Sport)
Manchester City ayaa dhammaystirtay saxeexa 19 jirka Pedro Porro kaas oo ay deg deg dib ugu amaahiyeen kooxda Real Valladolid. (Football Espana)
Iyadoo ay bur-bureen heshiisyadii uu Daniele Rugani ugu wareegayay kooxaha Arsenal iyo Wolves midkood ayay haatan kooxda Roma dhigeeda Juventus weydiisatay inay hal sano oo amaah ah ku qaadato daafacan. (Sportitalia)
Daafacii hore ee kooxda Liverpool ee Martin Skretal ayaa ku biiray kooxda ree Talyaani ee Atlanta. (Various)